Foormulichii tarree naqaa keessatti mul'ata. Hangii man'eewwan gabatee tokko keessaa ifteessuuf, haantuuteen man'ee barbaaddu fili. Akkasuumas wabiiwwanii man'ee walfakkaatanii tarree naqaa keessatti mul'atu. Akka barbaachiisumaa saatitti, ulaagaalee dabailataa galchiitii, galfata kee mirkaneessuuf Fayyadami cuqaasi. Akkasuumas yoo caasimaa isa sirrii beektee, foormulaa qixxaan galchuu nidandeessa. Fakkeenyaaf, qaaqawwanii Dirreewwan Saagi fi Dirreewwan Gulaali kun barbaachiissoodha.
Goolaba Filmaata Foormulaa
Bu'uura Dalaga Herrega
Fakkeenyaaf: <A1> + 8
Garaa garummaa herrega
Fakkeenyaaf: 10 - <B5>
MUL yk *
Fakkeenyaaf: 7 MUL 9
HIR yk /
Fakkeenyaaf: 100 DIV 15
Dalagaale bu'uuraa baafata xiqqaa keessaa
Fakkeenyaaf: SUM <A2:C2> ida'ama gatiiwwan man'ee A2 hanga C2 jiran agarsiisa
Fakkeenyaaf: 15.678 ROUND 2 n 15.68 agarsiissa
Fakkeenyaaf: 10 + 15 PHD n 10.15 agarsiissa
Fakkeenyaaf: SQRT 25 n 5.00 agarsiissa
Fakkeenyaaf: 2 POW 8 256.00 agarsiissa
Fakkeenya tarree tokko fayyadamuu:
Fakkeenyaaf: Yoo qabiyyeen A1 2 n qixxee tahe, <A1> EQ 2 n 1 agarsiissa
Fakkeenyaaf: Yoo qabiyyeen A1 2 n qixxee tahe, <A1> EQ 2 n 0 (soba) agarsiissa.
Gadii yk Qixxee
Fakkeenyaaf: Yoo qabiyyeen A1 2 n gadii yk qixxee tahe, <A1> LEQ 2 n 1 (dhuggaa) agarsiissa.
Irra Caalaa yk Qixxee
Fakkeenyaaf: Yoo qabiyyeen A1 2 n Irra caalaa yk qixxee tahe, <A1> GEQ 2 n 1 (dhuggaa) agarsiissa.
Fakkeenyaaf: Yoo qabiyyeen A1 2 dhaan gadi tahe, <A1> L 2 n 1 (dhuggaa) agarsiissa,
Fakkeenyaaf: Yoo qabiyyeen A1 2 n kan caaluu tahe, <A1> G 2 n 1 (dhuggaa) agarsiissa,
Fakkeenyaaf: wanti hundiinuu buu'aa 1 (dhuggaadhaa), 0 OR 0 0 (soba) agarsiissa.
Buuliyaanii X Yk
Fakkeenyaaf: 1 XOR 0 1 agarsiissa (dhuggaa)
Fakkeenyaaf: 1 AND 2 1 agarsiissa (dhuggaa)
Fakkeenyaaf: NOT 1 (dhuggaa) 0 agarsiissa (soba)
Fakkeenya: MEAN 10|30|20 agarsiisa 20
Fakkeenya: MEAN 10|30|20 20 agarsiisa
Fakkeenyaaf: MEAN 10|30|20 20 agarsiisa
Fakkeenyaaf: SIN (PI/2)
Fakkeenyaaf: COS 1
Fakkeenyaaf: TAN <A1>
Fakkeenyaaf: ASIN 1
Fakkeenyaaf: ACOS 1
Fakkeenyaaf: ATAN 1
Amalawwan galmeetiif jijjiirama
Amalawwan galmee kanaan gadii Faayilii - Amalawwan - Xiinannoo jalatti argamu.
Lakkoofsa arfiilee galmee keessaa
Lakkoofsa jechoota galmee keessaa
Lakkoofsa keewwatoota galmee keessaa
Lakkoofsa saxaatoo galmee keessaa
Lakkoofsa gabatoota galmee keessaa
Lakkoofsa miseensoota OLE galmee keessaa
Lakkoofsa ida’ama fuuloota galmee keessaa
Gatii Hiika Dabalataa
0 dhaan qixxee miti